माइभ्याली गोल्डकपमा बर्सेनि दर्शकहरु घट्दै - Nayabulanda.com
माइभ्याली गोल्डकपमा बर्सेनि दर्शकहरु घट्दै
नयाँ बुलन्द २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १९:५९ 310 पटक हेरिएको
इलाम : इलाम सदरमुकाममा आयोजना गरिने माइभ्याली अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकपमा दर्शकहरुको मोह बर्सेनि घटदै गएको पाईएको छ । अघिल्लो बर्ष भएको प्रतियोगिता भन्दा यस पटकको प्रतियोगितामा सोचे जतिको दर्शक देखिएनन् ।
बर्षेनी दर्शकहरु घट्दै गएकाले आयोजकलाई समस्या बढ्दै गएको आयोजक माइभ्याली फूटबल क्लबका अध्यक्ष धिरेन चेम्जोङले बताए । केही वर्ष अगाडी नै आयोजकले एकाडेमी सञ्चालन गरेर आयोजकको स्थानिय खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष राखेको थियो ।
तर हालसम्म पर्याप्त जग्गा नभएका कारण समस्या भएको अध्यक्ष चेम्जोङले बताए । जग्गा प्राप्त भए एन्फाले समेत सहयोग गर्ने र आफुहरु समेत तयार रहेको उनले बताए ।
आयोजक र मच्छिन्द्र बिच प्रतिष्पर्दा हुँदै
माइभ्याली गोल्डकपको उपाधिका लागि स्थानिय आयोजक र लिग बिजेता मच्छिन्द्र क्लब बिच शनिबार प्रतिष्पर्दा हुँदैछ । इतिहास रच्दै पहिलो पटक माइभ्याली फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
छैटौँ संस्करण सम्म आइपुग्दा माइभ्याली अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरको हो । माइभ्यालीका लागि यो ठुलो अवसर हो ।
खेलको लागी दुबै टिमका प्रशिक्षकले आफुहरु जितका लागि खेल कौशल देखाउन लागि पर्ने बताएका छन् । प्रि म्याच कन्फ्रेसनमा बोल्दै दुबै टिमका प्रशिक्षकले उपाधिको लागी मानसिक तथा शारिरिक रुपमा तयार भएको बताएका छन् ।
आयोजक र मच्छिन्द्र दुबै टिमले पहिलो पटक आमन्ने सामन्ने भएर फाइनल खेल्न लागेका हुन् ।
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा लिग जितेको मछिन्द्र क्लब संग स्टार खेलाडीहरु रहेका छन् ।
यता आयोजकले बिभिन्न क्लबका खेलाडीहरु मिश्रणमा टीम निर्माण गरेको छ । बिदेशी खेलाडीहरुको भरमा खेल जित्ने लक्ष्यमा रहेको आयोजक स्टार खेलाडीहरुले भरिएको मच्छिन्द्रलाई हराउन त्यति सहज भने छैन् ।
धनकुटामा समाचार संकलनमा अवरोध
वडाध्यक्षको कुटपिटबाट घाइते
क्वारेन्टाइनबाट फरार युवा सिंहबाहीनीमा फेला
सिङफ्रिङ क्वारेन्टाइनबाट भागे एक युवक
ताप्लेजुङमा स्काभेटर पल्टिँदा चालकको मृत्यु
माइजोगमाई गाउँपालिकाले दियो ३०९ घरपरिवारलाई खाद्यान्‍न
आहा क्या राम्रो गुराँस !
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा एक सनसनीपूर्ण खुलासा !
‘अहिले प्रश्न होईन काम गर्ने समय हो’ : मुख्यमन्त्री राई